Wasiir Godax Barre oo looga yeeray Golaha Baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo imtixaankii sanadkan | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Wasiir Godax Barre oo looga yeeray Golaha Baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo...
Wasiir Godax Barre oo looga yeeray Golaha Baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo imtixaankii sanadkan
Wasiir Godax Barre oo looga yeeray Golaha Baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo imtixaankii sanadkan.
Guddiga xaqiiqo raadinta ah ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullahi Goodax Barre, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Agaasimaha Waaxda Imtixaanaadka ee Wasaaradda dhammaantood inay ku hor yimaadaan xildhibaanada Golaha Shacabka si wax looga weydiiyo imtixaankii Shahaadiga ahaa ee sanadkaan ay qaaday wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Guddiga ayaa yiri anaga oo fulinayna ammarka guddoomiyaha golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya waxaan si xushmad iyo qadarin leh idiinkaga codsanaynaa inaad noogu timaadiin Xaruunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka si aan wax idiinkaga weydiino natiijadii imtixaankii Shahaadiga Ahaa ee dugsiyada sare ee dalka.
Waxaan idinka rajeynaynaa in aad timaadaan xaruunta Villa Hargeysa ee maalinta Arbacada ee taariikhdu tahay 21-10-2020-ka.
Dalabka golaha shacabka Baarlamaanka ee u yeerista wasiirka waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa yimid kaddib markii ay imtixaanka dowladda Soomaaliya sanadkaan ku dhaceen in ka badan 8,000-Siddeed kun oo arday kuwaas oo 90% ah ardayda wax ku baratay gobolka Banaadir.